We Fight We Win. -- " More than Media ": ကဗျာ
ငါကိုငါရှာဖွေခြင်း သို့ မဟုတ် ငါတယောက်ထဲဖတ်ဖို့ ကဗျာ
အနောက် နိင်ငံတွေ ဘာကြောင့်ချမ်းသာ တာလဲ။
ငါဒို့ ဘာကြောင့်ဆင်းရဲ ရသလဲ။
အနောက် နိင်ငံတွေ ဘာကြောင့် သုခ တွေခံစားနေရသလဲ ။
သူတို့ က ဘာကြောင့်ပျှော်ရွှင်နေသလဲ ။
ငါတို့ က ငို နေသလဲ။
သူတို့ က သူတို့ ဘုရား စကားကို နားထောင်တယ်။
ငါတို့ က ငါတို့ ဘုရားဟောတာကိုနားမထောင်ဘူး။
ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း သူတို့ က တသွေမတိမ်းလုပ်တယ်။
ငါတို့ က တလွဲ လုပ်တယ်။
သူတို့ က ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားမှာရေးတယ်။
ငါတို့ က ဘုရား ဟောတွေကို ညစ်ပတ်နေတဲ့ နံရံတွေမှာရေးထားကြတယ်။
သူတို့ က ဘုရားကို တိုးတိုးလေးရှစ် ခိုးတယ်။
ငါတို့က ဘုရားကို ခုနစ်အိမ်ကြားရှစ်အိမ်ကြားရှစ်ခိုးတယ်။
သူတို့ က ဘုရားကို ရိုးရိုးပဲရှစ်ခိုးတယ်။
ငါတို့ က ဘုရားကို အသံချဲ့ စက်နဲ့ ရှစ်ခိုးတယ်။
သူတို့ က တောကိုသွားတယ်။
ငါတို့ က မြို့ မှာပဲခြေကျင်လိမ်နေတယ်။
သူတို့ က မရှိတဲ့သူကို ကူညီတယ်။
ငါတို့ က မရှိတဲ့သူတွေ ကို မကူညီဘူး။
သူတို့ က အိမ်ရှေ့ လမ်းမ မှာ တံပျက်စီးလှဲတယ်။
ငါတို့က ဘုရားမှာ တံပျက်စီးလှဲတယ်။
သူတို့ က တရားကို ပြန့် ပွားအောင်လုပ်တယ်။
ငါတို့ က ဘုရား တွေ များ သတဲ့များအောင်တည်တယ်။
သူတို့ က တရားကုို ကြီးသထက်ကြီးအောင်လုပ်တယ်။
ငါတို့က ဘုရာရုပ်ထု ကို ကြီးသထက်ကြီးအောင်လုပ်တယ်။
သူတို့ က လူတွေကို ကျွေးတယ်။
ငါဒို့ က ဘုရားကိုကျွေးတယ်။
သူတို့ က သမာကျမ်းစာအုပ်ကို အလကားပေးတယ်။
ငါတို့ က ဘုရား ရုပ်ထု ကို ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းစားကြတယ်။
သူတို့ က သမာကျမ်းစာအုပ်ကို လူတိုင်းဖတ်နိင်အောင်လုပ်ထားတယ်။
ငါတို့ က ပါဌိပါသာဒ်နဲ့ဖတ်လို့ ကို မရအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။
သူတို့ကျမ်းစာတွေက လေ့လာစရာပိုချကြတယ်။
ငါတို့က ဘုရားဟော စာအုပ်တွေကို အလှပြကာ ရွှေချ ကြတယ် ။
သူတို့ က ကျောင်းတွေ ၊ ဆေးရုံ တွေ၊ စာကြည့်တိုက်တွေကို သတယ်။
ငါတို့ က ဘုရားကို ရွှေ ချတယ်။
သူတို့ က မြေတွေကို ဝေတယ်။
ငါတို့ ကမြေတွေကို သိမ်းတယ်။
ငါတို့ ခရီးသွားရင် ဂါထာရွတ်တယ်။
သူတို့ က တိရိစ္ဆာန်တွေကိုသနားတယ်။
ငါတို့ က တွေ့ တဲ့အကောင်အကုန်စားတယ်။
သူတို့ က နတ်ပြည်ကို အိမ်ထဲ ကို ခေါ်ထားဖို့ လုပ်နေကြတယ်။
ငါတို့ က အိမ်တွေ ပြစ်ပြီး နတ်ပြည်ကို သွားဖို့ လုပ်ကြတယ်။
သူတို့က ဘုရားကို မကြောက်ဘူး။ ချစ်တယ်။
ငါတို့ က ဘုရားကို ကြောက်တယ်။ မချစ်ဘူး။
သူတို့ က ဘုရားကို အမြဲသတိရ
ငါတို့ က ဘုရားကို ဒုက္ခရောက်မှာ တမ်းတ။
ငါတို့ က ကိုယ်ကျိုး အတွက် ဘုရားကို အသုံးချတယ်။
အာဏာရဖို့ ဘုရားကို အသုံးချတယ်။
မိန်းမ ရဖို့ အသုံးချတယ်။
ရေမကြီးဖို့ မီးမလောင်ဖို့ အသုံးချတယ်။
ဘုရားက သမာအာဇီဝလို့ ဟောတယ်။
ငါတို့ က အလေးခိုးတယ်။ ဆေးဆိုး တယ်။
သူတို့ က ရန်ဖက်ကို မိတ်ဆွေလုပ်တယ်။
ငါတို့ က မိတ်ဆွေကို ရန်သူဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
အဆင်မပြေ တာ ကို သူများကိုလွဲချနိင်ဖို့ ဘုရားကို အသုံးချတယ်။
ဘုရားက လူတိုင်းကို ချစ်ဖို့ ဟောတယ်။
ငါတို့က မုန်းဖို့ကြိုးပန်းနေကြတယ်။
လူသားတိုင်းကို မေတ္တာ ထားဖို့ ဟောကြားခဲ့တယ်။
ငါ တို့က တော့ အဘိဇာပွားနေကြတယ်။
ဘုရားက ရုပ်နဲ့နမ် ကို တည့်တည့်ရှု့ ဖို့ ပြောတယ်။
ငါတို့ က အမျိုးသားရေး ကို ကြည့် ကြ တယ်။
ဘုရားက ပြသနာ ကို ခန̔ာကိုယ်မှာ ရှာဖို့ ဟောတယ်။
ငါတို့ က ပြသနာ တိုင်းကို သူများ ခနာကိုယ်မှာရှာနေကြတယ်လေ။
သစ္စာ ၄ ပါး လို့ဟောခဲ့တယ်။
ငါတို့က ၉ ၆၉ လုို့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တယ်။
ငါငို နေတာဘာဆန်း လဲ။
Whatabrilliant poem. That is freaking awesome Mr.Moethee.
You are suchagreat talented warrior.
Your words are awesome and very truthful.
သူတို့ က တောကိုသွားတယ်။ ငါတို့ ကNew York မြို့ မှာပဲခြေကျင်လိမ်နေတယ်။
Haaa, stupid guy
because of u guys myanmar is not peaceful upto now.
စောက်ပေါ ၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့လာမနှိုင်းနဲ့ကွာ
မင်းရေးထားတဲ့ကဗျာက မင်းလို အမေကျော်ထွေးတော်လွမ်းသူတွေဆီမှာပဲရှိတာကွ
မင်းဟာတော်တော် မကောင်းမြင်တတ်တဲ့ ဇောက်ထိုးတစ်ကောင်ပဲကွာ....မင်းအမေလိပ်စာပေးကွာ မင်းကို ကန့်လန့်မွေးခဲ့သလားလို့ ငါသွားမေးမယ်...